विघटन सदर गरिएको भए के हुन्थ्यो?
पूर्णमान शाक्य बिहीबार, फागुन १३, २०७७
विघटन सदर गर्न संविधानभित्र ठाउँ खोजेर व्याख्या भएको भए फैसलाकै बैधता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्थ्यो। यसले राष्ट्रमा संकटको स्थिति आउँथ्यो।
नेपालको संविधान २०७२, देशको नयाँ संविधान हो। र, यस संविधानअनुरूप बनेको संसदलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नु मुलुकको राजनीतिक जीवनमै एकदमै अस्वाभाविक घटना थियो।
किनकि, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिइकनै यो संविधान निर्माण भएको हो। जुन धारा ७६ मा प्रष्ट छ।
विघटन निर्णयविरुद्ध स्वाभाविकरूपले मुद्दा पर्‍यो, संवैधानिक इजलास गठन भयो। जसबाट यो संविधानको सरकार निर्माणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सघनरूपले व्याख्या गर्ने अवसर खडा भयो।
वास्तवमै, संविधानले प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटन हुन नसक्ने स्षष्ट शब्दमा उल्लेख गर्दागर्दै ओलीले त्यसलाई अपव्याख्याबाट धकेलेर अनिश्चितता र संविधानहीनतामा पुर्‍याउने कोशिश गरेकै हुन्।
एउटा साधारण चेतना भएको मानिसले संविधानको धारा ७६ सर्सर्ती पढ्ने हो भने पनि संसद विघटनको कुनै गुन्जाइस देखिँदैन।
थप अलिकति पनि व्याख्या आवश्यक नपर्ने गरी धाराले प्रष्ट बोलेको अवस्था छ।
यस्तोमा पनि सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय सदर गरिदिएको भए त्यो संविधानमाथिकै बबण्डर हुन्थ्यो र त्यसका कारण मुलुक र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्थ्याे।
खासमा त्यो संविधानको व्याख्या नभएर संशोधन ठहर्थ्याे।
आधुनिक संसदीय व्यवस्था परम्पराको शक्ति पृथकीकरण अभ्यास हेर्दा न्यायालयले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन।
व्याख्यामात्र गर्न सक्छ। संविधान संशोधनको काम संसदको दुईतिहाइले गर्ने हो।
‘सेपरेसन अफ पावर’ को सिद्धान्तविपरीत संविधानलाई दायाँ–बायाँ गर्नै मिल्दैन।
अदालत वा भनौं न्यायाधीशहरू ‘डेमोक्रेटिकल्ली इलेक्टेड’ र ‘एकाउन्टेबल’ निकाय होइनन्। तसर्थ, अदालतले विघटनको निर्णय सदर गरेको भए त्यो ठूलो संवैधानिक ‘दुर्घटना’ हुने थियो।
संविधानको धारा ७६ को (७) आफैंमा प्रष्ट छ। प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि ओलीले ‘मेरोमा विघटनका लागि अन्तर्निहित अधिकार छ, मलाई ७६ को (७) ले मात्र विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने छैन ८५ ले पनि दिन्छ’ भन्ने दलील उठाए।
पहिलेदेखि चल्दै आएको राजनीतिक परम्पराले पनि मलाई विघटनको अधिकार दिन्छ भनेर गोलमटोल दाबी गर्न उनी चुकेनन्।
यावत परिस्थितिमा सर्वोच्च अदातलबाट धारा ६७ को (७) ले के भन्छ भन्ने विषयलाई प्रष्ट पारिदिएको हो। फेरि पनि अपव्याख्याको कोशिश गर्न नमिल्ने गरी प्रष्ट पारेको हो। यो गर्नैपर्थ्याे।
एमिकस क्युरीले आफ्नो राय दियो र सबैले बहस नोट बुझाएको भोलिपल्टै फैसला पनि भयो।
यति प्रष्ट हुँदाहुँदै यो प्रकरणको यात्रा संविधानवादीहरूका लागि सकसपूर्ण भएको बुझ्न सकिन्छ। यो सकसलाई म कसरी हेर्छु भने सर्वोच्च अदालतले संविधानमा अक्षरशः जे जस्तो व्यवस्था छ, त्यसलाई साधारण तरिकाबाट बुझेर संविधानको व्याख्या गर्नेतिर लागेको भए यो यात्रा सरल हुन्थ्यो। यसमा शंका–उपशंकाको वातावरण नै सिर्जना हुँदैनथ्यो।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रष्ट व्यवस्थालाई नाघ्न खोज्दा तनाव पैदा भएको हो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एक लयमा संविधानविपरीत गएर विघटन गराउन खोज्दा त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न बल गर्नुपरे जस्तो देखियो।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदातलमै चुनौती गरिने भो। सर्वोच्चले पनि ७६ (७) को प्रष्टतातर्फ सिधै जानुपर्नेमा अलमल गरेको देखियो।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित जवाफमा जुन दाबी गरे, अदालतले त्यसलाई पनि संविधानभित्र कहीँ कतै ठाउँ दिन मिल्छ कि भनेर बुझ्न चाहेजस्तो देखियो। सकस त्यहीँबाट सुरु भएको हो।
एमिकस क्युरीको बहस नटुंगिएसम्म प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि संविधानको व्याख्या हुने ठाउँ छ कि भन्ने सम्भावनालाई इजलासले जिवित राखेको महसुस भएको थियो।
यसले गर्दा शंकाको वातावरण महसुस गरियो। तर, एमिकस क्युरीको बहस हस्तक्षेप बलियो रह्यो, न्यायाधीशहरूलाई रुलिङ गर्न सहज भयो।
अबको कोर्स के हुन्छ?
अब त यो फैसलाले संविधान विघटनको जे जति प्रक्रिया भए ती सबैलाई शून्यतामा पुर्‍याएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएर गएको र त्यसको आधारमा विज्ञप्ति निकालेको मितिभन्दा पहिलेको अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। अहिले संसद जीवित भएको छ, अब आफ्नो प्रक्रियाअनुसार काम गर्न सक्छ।
१३ दिनभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न र संसद बोलाउन परमादेश पनि जारी भएको हुनाले अब जे जति हुन्छ संसदभित्रै हुन्छ।
ओलीले अहिले पनि राजनीति खेल्न सक्छन्! ओलीले अब पनि राजिनामा नदिई राजनीति खेल्न सक्छन्।
प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेनन् भने १३ दिनपछि सुरु हुने संसद बैठकमा उनी परीक्षित हुने अवस्था पनि आउला।
सर्वोच्च अदालतले परेको मुद्दाको क्षेत्रभित्र रहेरमात्र निर्णय दिने हो, त्यो आइसकेको छ। अब बाँकी काम संसदबाट हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस र त्यसमा टेकेर राष्ट्रपतिले सदरको विज्ञप्ति निकालिरहँदा त्यही दिन संसद सचिवालयमा ८९ जना सांसदले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन संसदको अधिवेशन समावेदन माग राखेर निवेदन दर्ता भएको छ।
त्यो बदर भएको छैन। संसद त पुनर्जीवित भयो। सुरुको अवस्थामा गएपछि उक्त निवेदन मान्य रहिरहन्छ। १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्नेबित्तिकै त्यो निवेदन पुनः सक्रिय हुन्छ।
त्यस्तै पार्टीहरूको मिलेमतोमा अर्को नयाँ प्रस्ताव पनि आउन सक्छ। ओली आफैं पनि ‘क्यारिओभर’ गर्न सक्छन्। ‘इट्स अल पोलिटिकल म्याटर्स।’ यसको सबै परिक्षण संसदमै हुन्छ।
तर, ओलीले राजीनामा दिए भने अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने बाटो खुल्छ। राजिनामा आएको खण्डमा संसदमा सकसपूर्ण अभ्यास गरिराख्न आवश्यक पर्दैन।
किनभने, नेकपा अहिले टुटेको छैन, एउटै पार्टी छ। त्यो अवस्थामा नेकपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएर अर्का नेता नियुक्त गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिले सोझै त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्छ। त्यो बाटो पनि खुल्छ।
हाल ओली संसदीय दलको नेता नै छन्। उनले बाटो खुला गरिसकेपछि अन्य विकल्प खुल्छन्। उनले राजिनामा नदिई अर्को दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। पार्टीको संसदीय दलले प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्छ तर यसका लागि संसदीय दलले नै निर्णय गर्नुपर्दछ।
ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई रिझाएर विश्वासको मत लिन सक्छन्। विश्वासको मत लिनसके उनले एक वर्ष थप चलाउन सक्छन्। त्यसपछि फेरि अविश्वासको मत आउन सक्छ।
हाम्रो संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको मत राख्न पाइँदैन। त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल भए विश्वासको मत लिएर एक वर्षसम्म सरकार चलाउन पाइन्छ।
ओलीले दुई वर्ष चलाइसके भने थप एक वर्ष ‘एक्सटेन्डेड लिज अफ लाइफ’ को ‘टेन्युर’ पाउँछन्। त्यसपछि फेरि अविश्वास प्रस्तावको सम्भावना हुन्छ।
संसद अब ‘रबर स्ट्याम्प’ बन्नु परेन
विघटनको निर्णय विफल हुनुमा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्नु मूलकारण हो। नत्र, सम्भव थिएन।
यो विघटन सदर गर्न संविधानभित्र ठाउँ खोजेर व्याख्या भएको भए त्यो फैसलाकै बैधता र स्वीकार्यतामा प्रश्न उठ्थ्यो। यसले राष्ट्रमा संकटको स्थिति आउँथ्यो।
किन आउँथ्यो भन्दा वैशाखमा चुनाव हुनैपर्ने हुन्थ्यो। जसको सम्भावना धेरै कम थियो। चुनाव गर्ने भनेर लागेको भएता पनि ‘ल एन्ड अर्डर’ बिग्रेर जे पनि हुनसक्थ्यो।
६ महिनाभित्र चुनाव हुन नसकेपछि संविधान ‘अफ द ट्र्याक’ मा जान्थ्यो। र, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन कठिन पर्थ्याे। ट्र्याकमा ल्याउन हाम्रो अर्को व्यवस्था नै छैन। बाधा अड्काउ फुकाउका विकल्प नै छैन। यस्तो गम्भीर स्थितिबाट मुलुक जोगिएकै हो।
यस्तो फैसला नआउँदा हुन्थ्यो त कुनै पनि चुनाव पछि बन्ने सरकार दुई वर्षभन्दा बढी नटिक्ने खतरा रहन्थ्यो। उसको अवधि सुनिश्चित हुँदैनथ्यो। यसले गर्दा मुलुक सधैं अस्थिरताको बन्दी बन्नुपर्ने हुन्छ।
विद्यमान दलगत राजनीतिको विश्लेषण गरेर हेर्दा नेपालमा कुनै पनि दल सत्तामा गएपछि अन्तर्विरोध वा विवाद आउँछ। र, प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्ने अस्त्र भनेकै विघटन हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला त्यसको दुरुपयोग गर्ने हुँदा संसद नै प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प भएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ।
संसद विघटन भई सांसदहरूले फेरि निर्वाचनमा गइरहनुपर्ने अवस्थामा संसद सुदृढ भएर कामै गर्न सक्दैन। त्यो हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि हितकर हुने नभएरै नयाँ संविधानले बलियो र प्रष्ट व्यवस्था गरेको हो।
(एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग आयोमेलकर्मी अनिता श्रेष्ठ र दीपक दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन १३, २०७७